မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအပြုအမူများတွင် ghrelin ၏အခန်းကဏ္: - ဖွံ့ဖြိုးဆဲနယ်ပယ်များနှင့်စာပေများတွင်ကွာဟချက်များ (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် ghrelin ၏အခန်းက္ပ: တစ်လန်းလာသောလယ်ပြင်နှင့်ကွာဟချက်စာပေအတွက် (2013)
Curr မူးယစ်ဆေးဗျာအလွဲသုံးစားပြုမှု 2013 Sep;6(3):231-44.
Ghrelin အစားအစာစားသုံးမှုမှတဆင့်စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာထိန်းညှိမယ့်အူ-ဦးနှောက်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ghrelin ကောင်းစွာ hypothalamic activation နှင့် homeostatic နို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်လူသိများသည်နေချိန်မှာပိုပြီးမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထား ghrelin ကိုလည်း dopaminergic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းမှတဆင့် hedonic နို့တိုက်ကျွေးရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဤစာတမ်းအုပ်ချုပ်ရေး (dopaminergic ဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ဒေသများသို့တိုက်ရိုက် intraperitoneal, intracerebroventricular, ဒါမှမဟုတ်) အ dopaminergic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများနှင့်ကြွက်များတွင်ဆက်နွယ်ဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုမြှင့်လုပ်ဆောင်ပုံကို ghrelin ။ စုံစမ်းစစ်ဆေး ဤအ variable တွေကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလေ့လာကြောင်း 19 ပင်ကိုယ်မူလစာပေတစ်ဦးကစုစုပေါင်းဤသုံးသပ်ချက်ကိုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ယေဘုယျအား ghrelin အုပ်ချုပ်ရေး dopamine နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အဆင့်ဆင့်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ (စံ Chow နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာများကိုနှစ်ဦးစလုံး) နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုအဖြစ်ဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ Ghrelin အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်း sucrose များအတွက်တုံ့ပြန်အော်ပရေတာများနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုတိုးပွားစေပါသည်။
အဆိုပါ dopamine ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ် ghrelin အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်စာပေ၏သေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကအောက်ပါကျနော်တို့ ghrelin နှင့် dopaminergic ဆုလာဘ် activation အကြားဆက်ဆံရေးဟာပုံစံကိုတင်ပြ။ အထူးသကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ကြိုးအပြုအမူတွေအတွက်ရလဒ်များသော mesolimbic dopamine ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း, လှုံ့ဆော်ရန်, ghrelin အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် ghrelin receptors (GHS-R1A) အပေါ်ပြုမူခြင်းနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် dorsal tegmental နျူကလိယ (LDTg).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုထံမှရလဒ်များ ghrelin စနစ်၏ရွေးချယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို dopamine ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များအပေါ် ghrelin ၏ဆိုးကျိုးများအတွက် sex- သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်-related ခြားနားချက်များစာမေးပွဲတစ်ခုမရှိခြင်းအပါအဝင်စာပေထဲမှာကွာဟချက်, မီးမောင်းထိုးပြ။ အမျိုးသမီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လူဦးရေကြားတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမှအားနည်းချက်၏အလငျး၌အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤတစ်ဦးချင်းခြားနားချက်အချက်များပစ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။